HAMRAKHABAR | » ‘सुशान्तमाथि बलात्कारको आरोप लाग्दा आफ्नो दोस्तीको किस्सा किन सुनाइनौ ?’: कंगना ‘सुशान्तमाथि बलात्कारको आरोप लाग्दा आफ्नो दोस्तीको किस्सा किन सुनाइनौ ?’: कंगना – HAMRAKHABAR
‘सुशान्तमाथि बलात्कारको आरोप लाग्दा आफ्नो दोस्तीको किस्सा किन सुनाइनौ ?’: कंगना
सुशान्त सिंहको अचानक मृत्यु भएपछि कंगना रनोट सोसल मिडियामा आफ्नो अफिसियल टिमको माध्यमले निकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनले सोसल मिडिया र मिडियासँगको अन्तरवार्तामा बलिउडमा नेपोटिजम, समूहवाद, फेभरटिजम, क्याम्पमा दबदबाविरुद्ध मोर्चा खोलेकी छिन् ।
कंगनाले बलिउडका अन्य थुप्रै नायिकासँग दुश्मनी पनि मोलेकी छिन् र यो विवाद अहिले पनि जारी छ । यसैबीच कंगनाले अब सुशान्तकी अन्तिम सह–कर्मीमाथि निशाना साँधेकी छिन् । संजनाले सुशान्तसँग उनको अन्तिम फिल्म दिल बेचारामा काम गरेकी छिन् जुन जुलाई २४ तारिखमा ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुँदैछ ।
कंगनाको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलमा सुशान्त र संजनामाथि लेखिएको पुरानो आर्टिकलको लिङ्क सेयर गरिएको छ । उक्त आर्टिकलमा सुशान्तको असाध्यै मित्रवत् व्यवहारले तनावमा भएर संजनाले सुटिङ बीचमा नै छोडिदिएको भन्ने जानकारी उल्लेख छ ।
उक्त आर्टिकल सेयर गर्दै कंगनाले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘थुप्रै खबरमा सुशान्तले संजनाको बलात्कार गरेको दाबी गरिएको थियो । यस्तो प्रकारको खबर त्यतिबेला आउनु साधारण भएको थियो, त्यतिबेला संजनाले यसबारे बोल्ने हिम्मत किन उठाइनन् ? जब सुशान्त जिउँदो थिए तब संजनाले आफ्नो दोस्तीको किस्सा यति तल्लीनताका साथ सबैलाई किन सुनाइनन् ? मुम्बई प्रहरी अनुसन्धान गर्नुहोस् ।’